ဆရာဝန်နှင့်တွေ့သင့်သောမကြာခဏတွေ့ရသည့်မီးယပ်နှင့်ပက်သက်သောရောဂါ5မျိုး - Intouchmedicare
ဆရာဝန်နှင့်တွေ့သင့်သောမကြာခဏတွေ့ရသည့်မီးယပ်နှင့်ပက်သက်သောရောဂါ5မျိုး
Last updated: 2021-12-20 | 167 ကြည့်ရှုခြင်း |
မီးယပ်ရောဂါဆိုသည်မှာ များသောအားဖြင့် မအင်္ဂါလိင်မျိုးပွားမှု့စနစ်လမ်းကြောင်းနှင့်ဆိုင်သည့် ၄င်းအနီးတစ်ဝိုက်တွင်ဖြစ်ပေါ်တတ်သော သားအိမ်ခေါင်းအဝ၊မွေးလမ်းကြောင်း၊သားဥအိမ်၊သားအိမ်၊သားအိမ်ပြွန်အပါအဝင် ဆိုသည့်အမျိုးသမီးအများစု အကြိုက်မတွေ့သောစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဖြစ်ပေါ်လာသောရောဂါလက္ခဏာများသည် အသက်အရွယ်အလိုက်ပြောင်းလဲတတ်သည်ဟုထင်သောကြောင့် ရောဂါဖြစ်သည်ကိုသိသောအချိန်တွင် ပြင်းထန်သောအဆင့်သို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သောကြောင့် ကုသရာတွင် ခက်ခဲမှု့အားဖြစ်စေပါသည်။မကြာခဏတွေ့ရသော မီးယပ်ရောဂါ5မျိုးမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
1. ဘတ်တီးရီးယားပိုးကြောင့်မိန်းမဂိုလ်ရောင်ရမ်းခြင်းရောဂါ (Bacterial Vaginosis)
ဘတ်တီးရီးယားပိုးကြောင့်မိန်းမဂိုလ်ရောင်ရမ်းခြင်းသည် ဤဘတ်တီးရီးယားပိုးကြောင့် ရောဂါအမြောက်အများလည်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လက်ထိုဘာစိလိ (Lactobacilli) ကောင်းသောဘတ်တီးရီးယားအရေအတွက်နည်းလာသောကြောင့် မွေးလမ်းကြောင်းရောင်ရမ်းမှု့ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ယားယံမှု့ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ယားယံမှု့ရှိခြင်း၊အဖြူဆင်းခြင်း၊ငါးညှိနံ့ကဲ့သို့သောအနံ့ရှိခြင်းအားဖြစ်စေပါသည်။အမျိုးသမီးတိုင်းတွင် အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။ သို့ပေမဲ့ မျိုးပွားသောအမျိုးသမီးအရွယ်များတွင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။အကယ်၍ ပြင်းထန်သောလက္ခဏာများရှိပါက စမ်းသပ်စစ်ဆေးရန်အတွက်ဆရာဝန်နှင့်တွေ့သင့်ပါသည်။မှန်းဆခြင်း (သို့) မိမိကိုယ်တိုင်ကုသခြင်းများမပြုလုပ်သင့်ပါ။
2. မှိုစွဲခြင်းကြောင့်မိန်းမဂိုလ်ရောင်ရမ်းခြင်းရောဂါဆိုသည်မှာ ပိုးဝင်ခြင်း (Vulvovaginal Candidiasis)
မှိုစွဲခြင်းကဲ့သို့သောပိုးဝင်ခြင်းကြောင့်မိန်းမဂိုလ်ရောင်ရမ်းခြင်းရောဂါ (Infection) မိန်းမဂိုလ်အနီးတစ်ဝိုက် လက္ခဏာပြတတ်ပြီး ဘတ်တီးရီးယားပိုးကြောင့်မိန်းမဂိုလ်ရောင်ရမ်းခြင်လက္ခဏာနှင့်လည်းတူပါသည်မှာ မိန်းမဂိုလ်တွင်းပူစပ်ခြင်း၊ဆီးပူခြင်း၊အရည်ကဲ့သို့သောအဖြူဆင်းခြင်း၊ အဖြူနှင့်အဝါရောင်ကဲ့သို့သောစေးကပ်သည့်အထိရောယှက်ခြင်းများသည် အနံ့မရှိပါသော်လည်း လိင်ဆက်ဆံသောအခါတွင်နာကျင်ခြင်းမျိုးရှိနိုင်ခြင်းနှင့် အကယ်၍ ပြင်းထန်သောလက္ခဏာများရှိပါက မည်သည့်ပိုးကြောင့်ဖြစ်သည်ကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးရန်အတွက် ဆရာဝန်နှင့်တွေ့သင့်ပါသည်။
3. သားအိမ်နံရံဖွံ့ဖြိုးမှု့နေရာမှားယွင်းခြင်း (သို့) ချောကလတ်ရည်အိတ်
သားအိမ်နံရံဖွံ့ဖြိုးမှု့နေရာမှားယွင်းခြင်း ဆိုသည်မှာ သားအိမ်အပြင်ဘက်တွင်ဖြစ်ပေါ်သည့် သားအိမ်နံရံကြောင့်ဖြစ်သောဖွံ့ဖြိုးမှု့မှားယွင်းသော မီးယပ်ရောဂါမျိုးကြောင့်စုစည်း၍ လိင်အင်္ဂါများအတွင်းငုပ်လျှိုးနေတတ်သည့်အမျိုးမျိုးသောရောဂါ ဝမ်းဗိုက်အတွင်း အများစုတွေ့ရသောတည်နေရာများမှာ သားဥအိမ်၊သားဥပြွန် နှင့်အနီးနားရှိ အခြားအင်္ဂါများအပါအဝင် တင်ပါးဆုံဧရိယာများတွင်ဖြစ်တတ်ပါသည်။တွေ့နိုင်သောလက္ခဏာများမှာ မိန်းမဂိုလ်အတွင်းပုံမှန်မဟုတ်သောသွေးထွက်မှု့ နှာတာရှည် ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်း (ဆီးခုံ) နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း ထိုသို့သောနာကျင်ကိုက်ခဲမှု့သည်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပိုမို၍ပြင်းထန်လာတတ်လေ့ရှိပါသည်။
သားအိမ်အကြိတ်တည်ခြင်းမီးယပ်ရောဂါသည် သားအိမ်ကြွက်သားဆဲလ်များမှ ချို့ယွင်းခြင်းမျိုးမှဖြစ်၍၄င်းသည် တိကျသောအဖြေအားမရရှိသေးပါ။ သို့ပေမဲ့ မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်(သို့)မဟော်မုန်းဓာတ်၏လှုံ့ဆော်မှု့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုယူဆကြပါသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သွေးဆုံးနိုင်သော အသက်အရွယ်တွင် အကြိတ်သေးငယ်လာခြင်းအား သတိထားမိခြင်းမှသိနိုင်ပါသည်။ဤရောဂါ၏ကြောက်စရာကောင်းမှု့မှာ ရောဂါ၏သတိပေးအချက်ပြမှု့မရှိသောကြောင့် အများစုသည်မိမိကိုယ်ကိုယ် ဤရောဂါဖြစ်နေခြင်းအားမသိနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။နှစ်စဥ်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု့သည် ရောဂါအား တွေ့ရှိနိုင်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည့်ရွေးချယ်မှု့တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာရောဂါသည် ပထမဦးမကြာခဏတွေ့ရှိနိုင်သောမီးယပ်ရောဂါမျိုးဖြစ်ပါသည်။အစဦးပိုင်းအဆင့်တွင် ပုံမှန်မဖြစ်သောမည့်သည့်လက္ခဏာမျိုးကိုမှမပြပါ။သို့ပေမဲ့ ပျံ့နှံ့သွားပြီးအလခြအနေတစ်ခုအဆင့်တွင် မိန်းမဂိုလ်မှ ပုံမှန်မဟုတ်သောသွေးထွက်မှု့လက္ခဏာများ အထူးသဖြင့် လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် (သို့) ရာသီလာပြီးနောက်တွင် အဖြူဆင်းခြင်း၊ဆီး (သို့) ဝမ်း၌သွေးရောပါခြင်လက္ခဏာများ
ရှိလာတတ်ပါသည်။ထို့ကြောင့် နှစ်စဥ်မိန်းမဂိုလ်အတွင်းစစ်ဆေးခြင်းသည် မပြန့်ပွားခင်ပထမအဆင့်အခြေအနေ၌ပင်လျှင် ရောဂါတွေ့ရှိနိုင်ခြင်းကြောင့် လွယ်ကူလျင်မြန်စွာကုသပျောက်ကင်းနိုင်မှု့အားကူညီထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤအရာများမှာ ဆရာဝန်နှင့်ပြသင့်သည့် မီးယပ်ရောဂါ5မျိုး၏မကြာခဏတွေ့ရတတ်သောလက္ခဏာများဖြစ်ပါသည်။ရောဂါ၏ ကနဦးအဆင့်တွင် လက္ခဏာပြနိုင်သည့်ရောဂါနှင့်လက္ခဏာမပြနိုင်သည့်ရောဂါဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး (သို့) အသိပေးအချက်ပြနေသောအချို့သောရောဂါများမှာ ဥပမာ ယားယံခြင်း၊ပုံမှန်မဟုတ်သောအဖြူဆင်းခြင်း၊ပြင်းထန်သောအနံ့ရှိခြင်းများသည် ဘတ်တီးရီးယားနှင့်မှိုပိုးဝင်ခြင်းများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး ဆရာဝန်နှင့်တွေ့၍ မိန်းမဂိုလ်အတွင်းစစ်ဆေးခြင်းသည် မှန်ကန်၍ပိုမိုတိကျသောရောဂါရှာဖွေစမ်းသပ်မှု့နှင့်ကုသမှု့အားရယူနိုင်ရန် နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။
မီးယပ်ရောဂါနှင့်ပက်သက်၍ အကြံဥာဏ်နှင့်အချက်အလက်များအားရယူလိုသူများအတွက် Intouch Medicare ဆေးခန်း၌ မီးယပ်စစ်ဆေးရန်အတွက် ဤလမ်းကြောင်းနှင့်ပက်သက်၍ကျွမ်းကျင်သောမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်များ၏ ဝန်ဆောင်မှု့ရှိပါသည်။သင့်ပညး မှန်ကန်သောယုံကြည်စိတ်ချမှု့ ၊တိကျမှု့နှင့်ဘေးကင်းမှု့များအတွက် သင်အိမ်နှင့်နီးသောဆေးခန်းဌာနခွဲတိုင်းတွင် သငနှင့်နီးသောဆေးထန်းဟု Google တွင်ရိုက်ရှာခြင်းဖြင့် (သို့) Websie ရှိတင်ထားသောအချက်အလက်များမှတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းဖြင့်လည်းဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးလျှင်ဝန်ဆောင်မှု့အားရယူနိုင်ပါသည်။
นรีเวช ตรวจภายใน คัน ตกขาว มีกลิ่น เหม็น ใกล้ฉัน မီးယပ် အတွင်းစစ်ဆေးခြင်း ယားယံခြင်း အနံ့ရှိခြင်း နံခြင်း သင်နှင့်နီးသော